चितवनका देवी ज्ञवाली भन्छन्, ‘पीडा पचाउन सक्नुपर्दो रहेछ’ – MeroJilla.com
चितवनका देवी ज्ञवाली भन्छन्, ‘पीडा पचाउन सक्नुपर्दो रहेछ’
काठमाडौं १३ कात्तिक । स्थानीय तहको चुनावमा झैँ यसपटक पनि चितवन सबैको चासोको चुनावी मैदान हुनेछ । जहाँ वाम गठबन्धनको तर्फबाठ प्रतिनिधिसभा चुनावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उठ्नेछन् । र उनलाई जिताउन माओवादीको साथमा हुनेछ नेकपा एमाले पनि । जहाँ एमालेका प्रभावशाली नेता देवी ज्ञवाली पनि छन्।
एक हिसावले हेर्दा माओवादी र पुष्पकम दाहालसँग ज्ञवालीको राजनीतिक दुष्मनी थियो , छ । प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालसँग उनको चुनावी प्रतिष्पर्धा अदालतसम्म आइपुग्यो । अन्ततः ज्ञवालीले चुनाव हार्नुपर्ने अवस्था भयो (नियोजित रुपमा हराइयो) । ज्ञवालीले त्यो पीडा ६ महिना नबित्दै कसरी भुलेका होलान् !
पीडा पचाउनुपर्दो रहेछ !
यही विषयमा ज्ञवालीसँग सोमबार बिहान फोन सम्पर्क गरी सोधिएको थियो । तर उनको बोलीमा कुनै निराशा र उदाशिनता थिएन । आफूलाई नियोजित रुपमा हराए पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको जीत र राष्ट्रिय हितका लागि व्यक्तिगत पीडा भुलेरै चुनावी मैदानमा लाग्ने ज्ञवालीको प्रतिक्रिया थियो ।
यद्यपि, उनले माओवादीको त्यो हर्कत प्रति आलोचना नै गरे । माओवादीले आफ्नो छवि सुधार्नको लागि पनि कुनै न कुनै बेला त्यस कामको आत्मालोचना गर्नैपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वाम गठबन्धनको सहमति अनुसार आगामी चुनावमा एमाले कार्यकर्ताहरु पनि माओवादी नेतालाई जिताउन लाग्नुपर्ने छ । तपाईँलाई नियोजित रुपमै हराएको पार्टीलाई कसरी भोट माग्नुहुन्छ ?
भनी उनलाई सोधिएको थियो । उनले यसरी जवाफ दिए
यो म एक व्यक्ति देवी ज्ञवालीको कुरा होइन । देवी ज्ञवाली जस्तै अरु साथीहरुको पनि व्यक्तिगत विषय होलान् । मेरो पार्टी नेकपा एमालेले वाम गठबन्धनको निर्णय गरेपछि त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नैपर्छ । इमानदारीसाथ यसलाई म स्वीकार गर्छु । व्यक्तिगत विषय वा व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि पार्टी र सिंगो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर हेरेको छु मैले । जब कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर लड्दा राष्ट्रको हित हुन्छ भने म एक व्यक्तिको कुरा महत्वपूर्ण रहेन । व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो फरक कुरा हो । जसर षड्यन्त्र गरियो, पीडा छ नी । तर पीडा पचाएरै लाग्नुपर्दो रहेछ ।
चुनावमा मतपत्र च्यातेर जस्तो गल्ती भयो त्यसको इतिहासले पनि मुल्यांकन गर्ला । मलाई आशा छ, माओवादीका साथीहरुले पनि चुनावमा गरेको गल्तीको क्षमा माग्नुहुनेछ । त्यस कामको पश्चाताप पक्कै हुनेछ, यदी उहाँहरुले आफ्नो गल्तीको क्षमा माग्नुभएन भने सिंगो कम्युनिष्ट शक्तिहरुप्रति हेर्ने आम दृष्टिकोण नै नकारात्मक हुनेछ । यस हिसावले पनि माफी माग्नुपर्ने छ । जब एमाले र माओवादीबीच वाम गठबन्धन भयो । त्यसपछि नै ज्ञवाली बारे अनेक टिप्पणी भए । उनको विषयमा थुप्रै अनुमान र प्रचारवाजी धेरै भए । माओवादीसँगको दुष्मनी को विषयलाई ;ज्ञवाली कांग्रेस छिर्न लागे भनी प्रचार पनि भयो । यस बारेमा ज्ञवालीले परिपक्व र विवेकी ढंगमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका छन् । उनलाई यस्तो सोधिएको थियो :
वाम गठबन्धनपछि देवी ज्ञवाली कांग्रेसमा छिर्न लाग्यो भन्ने हल्ला पनि आयो नी ! कु कुरा हो ?
यस्ता टिप्पणी पनि आए । तर म आफ्नो राजनीतिक संघर्ष र यात्रामा प्रष्ट छु । यस विषयमा यसअघि पनि मैले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइसकेको छु । काठमाडौंमा अध्यक्ष केपी ओली ज्यू र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सँगै भेट हुँदा पनि यसबारे प्रष्ट भनिसकेको छु ।
म आफ्नो पढाइ, परिवार सबै कुरा त्यागेर सानै उमेरमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ । एउटा सिंगो जीवन सुम्पेर बनाएको राजनीतिक करिअर त्यसै टुंग्याउनेछैन । चुनावमा माओवादीले गैरराजनीतिक काम गर्यो भनी इगो लिने हो भने त, आखिर माओवादीसँग मिलेर मलाई हराउन खोज्ने त कांग्रेस पनि थियो नी । बिगतमा जे जस्ता गल्ती भए, ति काम अवस्य पनि गर्नै नहुने गल्ती थिए । तर मलाई व्यक्तिगत रुपमा नमिठो लागे पनि पार्टी र राष्ट्रिय हितको लागि बिचलित भएको छैन ।
बिप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज पक्राउ गर्न खोज्दा प्रहरी जवान घाइते	Sunday, June 10th, 2018
चितवन: कुखुरामा देखियो बर्डफ्लु	Friday, May 18th, 2018
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पहिरो , सडक अवरुद्ध	Thursday, May 17th, 2018
चितवनमा एकै महिनामा २८ दुर्घटना, ९ जनाको ज्यान गयो	Tuesday, May 15th, 2018
चितवनको भाटभटेनीमा विप्लव कार्यकर्ताद्वारा बम विस्फोट	Sunday, May 13th, 2018